Wepamusoro 5 Zhizha Runako Zvakakosha Kune Chiso Chako, Muviri neBvudzi | Trivoshop
musha nhau Wepamusoro 5 Zhizha Runako Runokosha Zvechiso Chako, Muviri uye Bvudzi
Share on Facebook Tweet musi Twitter Share musi Google+ Share musi LinkedIn Pin musi Pinterest
Wepamusoro 5 Zhizha Runako Runokosha Zvechiso Chako, Muviri uye Bvudzi
Zhizha rasvika, uye zvese nezve iro zuva-kutsvoda kutaridzika neicho chisingashande, kupenya kwechisikigo kunowana shamwari dzako dzese dzichikubvunza kwawakamboenda kuzororo.
Kune nzira dzakawanda dzekuti ganda rako ripenye kana iwe uri kumahombekombe kana kunyangwe usina kusiya imba yako. Kuti uzadzise izvo isu tinogovana newe edu epamusoro mashanu runako akakosha kuti uchinjise kumeso kwako nemuviri mwaka uno.
Natural Bronze Muviri
Chii chiri nani pane echinyakare kupenya kwezhizha? Kupenya uko iwe unogona kuibirira pasina kukuvadza ganda rako nekuisa muzuva kana dumba rekusvira. Kuti upe muviri wako zvakasarudzika-zvinotaridzika zvakaita bronzed kupenya kushandiswa Mineral Fusion - Zvishoma nezvishoma Kuzvidzora Tani. Iyo yakapfava paganda rako isina kuvhara ma pores ako, uye inokupa mwenje tint, futi. Nekudzora zvishoma nezvishoma, unogona kudzora kuti rakadzika sei vara nekushandisa pamusoro peiyo mazuva mana kusvika manomwe.
Zorodza Chiso Chako
Pamwe nekutanha muviri wako, iwe unofanirwa kutaura kumeso kwako pamwe nekuve nechokwadi chekuchengetedza ganda rako rakanyoroveswa uye risina mafuta. Sarudzo yakanakisa ichave Rosewater + Witch Hazel toner iyo inosanganisirwa nerose mvura, aloe vera, uye muroyi hazel. Iyo aloe vera inodiridza uye inozorodza ganda rako rechiso ichikupa iwe hutsva hutarisiko. Kunyangwe zvakatonyanya kukosha, inochengetedza iyo pH nhanho mune chaiyo chiyero.
Chengetedza Ganda Rako
Paunenge uri kunze munguva yezhizha, kuva negirazi regirazi ndiko kunofanirwa, asi nderupi rudzi rwaunofanira kusarudza? Zvichienderana nezvaunoda iwe pachako, unogona kusarudza sekunyorovesa kirimu, kana kana iwe uchida kusanzwa chero chinhu paganda rako, shandisa gel kana pfapfaidzo. Vamwe vanhu vanofarira kushandisa mapiritsi ekuti vakurumidze uye vamwe vanozofarira kirimu kuti vakwanise kunyatsoona kwavakaishandisa. Chero chaunosarudza, ita shuwa kuti unochiisa kwete pane muviri wako chete asi kumeso kwako zvakare.
Sezvambotaurwa, girobhu rezuva harifanirwe kuve chikamu chinotaurirana chezviitiko zvako zvezuva nezuva, asi zvakadiniko nemiromo yemiromo? Sezvo ganda riri pamuromo wako rakatetepa, rinoita kuti riwedzere kutambura kukuvara kweUV. Miromo inonakidza pakati pehusiku, asi mukati mezuva iwe unofanirwa kushandisa chimwe chinhu chinopa hunyoro hurefu-husingagone kushatisa. Uchishandisa bhalumu yemuromo ine SPF chinhu, iwe unodzivirira kukuvara kwezuva uchigadzirisa miromo yako. Tinokurudzira kuedza a Gwenga Essence Lip Balmpamwe nekokonati kuravira.
Bvudzi Rako Rakakodzera Kutarisirwa
Kwete kungoisa bvudzi rako chete kune chezuva kwenguva refu kunopedza mafuta aro ekudzivirira asi zvakare kuchakuvadza chimiro chemaseru, zvichikonzera kupera kwemavara, kupatsanurwa kumagumo uye kuonda. Kupa hunyanzvi hwekuvandudza antioxidants uye yakasarudzika UV mafirita ebvudzi nemusoro, Desert Essence Shampoo Italian Red Grape inopa dziviriro kubva kune zvinokuvadza zvinokanganisa nharaunda senge UVA mwaranzi inopa kumwe kupenya kubvudzi rako.
Zhizha inguva yakakwana yekuzorora uye kunakidzwa nekuve kunze, asi kana iwe uchida kuti muviri wako unakirwe zvakare usakanganwa kuisa zuva nekudziya kwekupisa pamusoro pekuchengetedza yako yenguva dzose ganda rekuchengetedza ganda.
Yakanyorwa mu: zvinokosha, chirimo, trivoshop
Previous nyaya Iyo Yakanakisisa Fenicha Yako Hofisi Imba
inotevera Iro Ramangwana rakawedzerwa